Google Nexus 5x နဲ့ Nexus 6P ကို​​ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Roundup - သတင်း Rule
Google Nexus 5x နဲ့ Nexus 6P ကို​​ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Roundup
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Google Nexus 5x နဲ့ Nexus 6P ပြန်လည်သုံးသပ် roundup: အထင်ကြီးအန်းဒရွိုက် flagships” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, အင်္ဂါနေ့ 20 အောက်တိုဘာလအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2015 08.29 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Google ရဲ့နောက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Android စမတ်ဖုန်း, က Nexus 5x နဲ့ Nexus 6P, သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်အများပြည်သူရောင်းချခြင်းအပေါ်သွားအဖြစ်အစောပိုင်းသုံးသပ်ရေးကနေနွေးထွေးစွာကြိုဆိုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ပြီ.
အဆိုပါဟန်းဆက်များ, အသီးသီး LG ကနှင့် Huawei ဖွငျ့, ခဲ့ကြ စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာကြေညာ. သူတို့က Google ရဲ့အန်းဒရွိုက်ဆော့ဖ်ဝဲ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းကိုဦးဆောင်ကြသည်, 6.0 Marshmallow.
The Guardian ကနှစ်ဦးစလုံး devices များကိုပြန်လည်သုံးသပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိ၏, ဒါပေမဲ့ဒီအတောအတွင်းအတွက်, ဤနေရာတွင်ကနဦးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်ဦးအမြန် roundup ဖြစ်ပါသည်.
ကို Nexus 6P
TechCrunch မှာ Drew Olanoff ဒီဇိုင်းဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, display နှင့်ကင်မရာကို performance ကို:
ကျွန်တော့်အတွက်, အ 6P အားလုံး Android ထုတ်ကုန်၏ဦးရစ်သရဖူရတနာဖြစ်ပါသည်, မခွဲခြားဘဲသူတို့ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ၏. Google က VP Bradley Horowitz ငါ့ကိုဤသူသည်အသွားရဲ့ device ကိုကြောင်းသိပါစေ.
ဒါဟာအနည်းငယ် quirks ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့တကကောင်းစွာလုပ်စက်ကိုဖွင့်နှင့် Android ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် operating system ကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ကြာ, Marshmallow. ငါက Google တနေ့ပြီးပြည့်စုံသောအညီဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအလုပ်လုပ်စိတ်ကူးသောအခါစိတ်ကူး, အ 6P သူတို့မသိလိုက်အကြောင်း fantasized device ကိုခဲ့သည်. ဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့င်, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်.
Engadget မှာခရစ် Velazco လည်း quirks မှတ်ချက်ပြု, ဒါပေမယ့် 6P ၏အရည်အသွေးနှင့်အတူခြုံငုံအထင်ကြီးခဲ့:
အဆိုပါကို Nexus 6P တစ်စုံလင်သောဖုန်းကိုမဖြစ်. ၎င်း၏ပါဝါခလုတ်ဆိုတာ touchy ဖြစ်ပါသည်. ၎င်း၏ဒီဇိုင်းကျက်သရေချို့တဲ့ရသောအမှုသည်တစ်ဦးအနည်းငယ်သည်. ကင်မရာက, ပိုကောင်းစဉ်, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျော်ကြီးမားတဲ့ခုန်မဟုတ်ပါဘူး. ထိုအသေး, အဘယျသို့ Google နဲ့ Huawei ကညာဘက်ရ, သူတို့ကအရမ်းလက်ျာရ. Android မှာ 6.0 Marshmallow စဉ်းစားဟန်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, တန်ဖိုးရှိသော update ကိုကအဖြစ်လုံးလုံးလြားလြားသိသိသာသာ Lollipop အဖြစ်မင့်လျှင်ပင်ဖြစ်ခဲ့သည်.
အ All-သတ္တုကိုယ်ခန္ဓာ၏မထိုက်မတန်နှင့် finish ကိုထိပ်တန်းထစ်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာသင်အမှန်တကယ်တစ်လက်တော်နှင့်အငြိမ့်ကိုအသုံးပွုနိုငျတဲ့အထုပ်သို့ကျက်သရေနှင့် oomph ၏ဖုန်းကဒ်ပဒေသာတူအလုပ်ဖြစ်တယ်. ဤနေရာတွင်ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, ဖုန်းကိုလူတိုငျးအတှကျမဟုတျပါဘူးလျှင်ပင်.
VentureBeat မှာမာကု Sullivan က Apple ရဲ့ iPhone ကို 6s တွေနဲ့သိသာထင်ရှားနှိုင်းယှဉ်ဆွဲငင်, နှင့်သူ၏အကဲဖြတ်အတွက်ပင်-ပေးအပ်ခဲ့:
အဆိုပါ iPhone ကို 6s က Nexus 6P ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်း. ဒါဟာဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲပေါင်းစည်းရေးအတွက်တန်းတူမပါဘဲနေသောပိုပြီးထက်မြက်ဒီဇိုင်နာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးင်. အိုင်ဖုန်း 6s 20-megapixel ကင်မရာ sensor များနှင့်အတူဖုန်းများထက်၎င်း၏ 12-megapixel ကင်မရာ sensor ကိုအတူပိုမိုကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ဒါကြောင့်ဖွင့်, ဥပမာအားဖြင့်.
ဒါပေမယ့် ... ငါပဲကျဆင်းသွားပြီးလျှင်၏နစ်မြုပ်ခံစားမှုနှင့်အတူအခြားနေ့က Apple Store ကထဲကလမ်းလျှောက်5အိုင်ဖုန်း 6s များအတွက်. တူနာကျင်မှုကိုသင်ဒဿနဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်: ဒါဟာဤသူတို့ကိုငါ့အားအအစွမ်းထက်နည်းနည်း devices များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင်ကစားအခန်းကဏ္ဍကိုနျဆနျးစလုပ် - ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကောငျးကြိုးအတှကျလွန်းကြီးတွေဖြစ်စေခြင်းငှါ.
ဒါနဲ့က Nexus 6P ကဲ့သို့သောဖုန်းကိုရနိုင်ပါလျှင် - တန်းတူသို့မဟုတ်ပိုကောင်းရထားတယ်အတူ - အဘို့0နည်းသော, ကောင်းစွာ, ငါအကြောင်းဟာအလွန်အလေးအနက်ထားစဉ်းစားသွားပေါ့.
က Wired ရဲ့ဒါဝိဒ်သည်ပီယပ်, အများဆုံးသုံးသပ်ရေးအဘယ်သူတူအနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့ device ကိုသာရှိခဲ့ပါတယ်, အသုံးပြုမှု၏ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေမှအချို့သောမှတ်စုထောက်ပံ့:
ဒီ Google ရဲ့မြင့်မားဆုံး, Ultra-ပရီမီယံ device ကို, ကမိတ်ဖက်ပြသရာ၌တ, developer များ, တစ်ခုနှင့် Android device ကိုဖွစျစနေိုကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်မျှကောင်းသော. ဒါဟာအသစ်သော software နှင့်အသစ်သောဟာ့ဒ်ဝဲရှိပါတယ်. ဒါဟာသင်ရိုက်မရနိုငျတဲ့ spec စာရွက်ရှိပါတယ်. ထိုအခါပထမဦးဆုံး၏အရာတစ်ခုခုအတွက် Google အတွက်, တကယ့်အကြိုက်ဖက်ဒီဇိုင်းင်.
ZDNet ရဲ့မဿဲ Miller က တစ်ဦးရဲပြန်လည်သုံးသပ်ကိုအပ်, device အတွက်ဝေဖန်ဖို့ဘာမှကိုရှာဖွေရုန်းကန်နေရ:
အဆိုပါကို Nexus 6P တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်ကိရိယာနှင့်တစ်ဦးအနီးအပါးစုံလင်သောရရှိ 10. ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ရှိပါတယ်, သငျသညျအနာဂတျမှာက Android ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးအသစ်ပြောင်းခြင်း၏ဂတိနှင့်အတူကိုထောက်ပံ့ပေး, နှင့်လျော့နည်းအခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းများထက်စျေးနှုန်းသည်.
ငါများသောအားဖြင့်တစ်ဦးကို Nexus ဖုန်းဖြင့်အချို့ဧရိယာ၌ချကြကုန်အံ့ခံရဖို့မျှော်လင့်ထား, ဒါပေမယ့်သောက Nexus 6P နှင့်အတူယခုနှစ်ကိစ္စတွင်မကငါဆို Cons ကိုရှာဖွေရုန်းကန်. သငျသညျလက်ရှိ Samsung နှင့် Apple ထုတ်ကုန်ကျော်အချို့သောပိုက်ဆံကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်က Nexus 6P မှားမသွားနိုင်. ဒါဟာအစားကြီးမားသောဖုန်းကိုဖွင့်, အရွယ်အစားကပြဿနာတစ်ခုမပါလျှင်ထိုအခါမူကားက Nexus 6P ရိုက်နှက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါသည်.
ကို Nexus 5x
TechCrunch ရဲ့ Olanoff လည်းတစ်လှည့်ဖျားများအတွက် 5x ကိုယူ, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ပိုမိုစျေးကြီးအဖော်နှင့်အတူအဖြစ်စွဲမှတ်မဟုတ်ခဲ့:
ငါပြီးခဲ့သည့်လကရဲ့အဖြစ်အပျက်မှာ 5x ကိုတက်ခူးနှင့် Wow "ထင်, ဒီကယ့်အလင်းဖြစ်၏။ "ငါမ 5x နှင့် 6P နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူစစ်မှန်သောအချိန်ဖြုန်းတယ်ခင်မှာ, ငါသည်ဤအိုင်ဖုန်းမှငါ့ကိုပယ် drags သော device ကိုဖြစ်သွားခဲ့ကွောငျးထင် 6. မမှု.
ငါသည်ငါ့လက်၌ကျင်းပခဲ့သောပိုပြီးအချိန်, ထိုစျေးနှုန်းချိုသာကခံစားရတယ်. ငါ Device ရဲ့ boatload ထွက်ကြိုးစားခဲ့နဲ့အလင်းဖြစ်ခြင်းကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်စျေးပေါပလပ်စတစ်လုံးဝငါ့ကိုပိတ်တူခံစားဖူးတဲ့. Google နှင့် LG က "ပရီမီယံဆေးထိုးပုံသွင်း polycarbonate ကြောင့်ခေါ်ဆို,"ဒါပေမယ့်ငါ့စိတ်ထဲပြောင်းလဲနေတဲ့မဟုတ်ပါဘူး.
Engadget ရဲ့နီကိုးလ် Lee က တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနိဂုံးဆွဲငင်, တန်ဖိုး-for-ငွေစျေးနှုန်းချိုသာ 5x အတွက်အာရုံစိုက်:
ဘတ်ဂျက်၏နေ့ရက်ကာလအဘို့နေကြရသောအောက်ခြေသောသူတို့အဘို့အ- နှင့်အိတ်ကပ်-friendly ကို Nexus ဟန်းဆက်များ, အ 5x သင်တို့အဘို့. အဘယ်သူမျှမ, ဒါဟာအတော်လေးက၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အဖြစ်ပရီမီယံအဖြစ်မန့်နှင့်၎င်း၏ပိုကြီး 6P အစ်ကို၏မြင့်မားဆုံးရထားတယ်ရှိသည်ပါဘူး, ၎င်း၏တတ်နိုင်စျေးနှုန်းနဲ့တက်သည်ကိုထက်ဒါပေမယ့်ပိုပြီး.
တဖန်သင်တို့ငွေကိုဖုန်း၏အတော်လေးတွေအများကြီးရပြုပါ: အဆိုပါ display ကိုချွန်ထက်သည်; ဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်းလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာအလုပ်လုပ်; စွမ်းဆောင်ရည်ချောမွေ့ဖြစ်ပါသည်; သငျတို့သညျလညျးတစ်လျောက်ပတ်သောကင်မရာကို get. တောင်မှ OnePlus သော်လည်း2နှင့် Moto X ကိုသန့်စင်သောကမ်းလှမ်းမှုကိုပိုကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်နှင့်အနည်းငယ်ပိုကောင်းရထားတယ်, သူတို့ကအလျင်အမြန်လက်ဗွေအာရုံခံကင်းမဲ့ပြီးသန့်စင်သော Android မှာအတှေ့အကွုံမကယ်မနှုတ်ဘူး.
VentureBeat ရဲ့ဂျော်ဒန် Novet ကိရိယာ၏ကင်မရာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တန်ဖိုးထား, အခြားသုံးသပ်ရေးတူပေမဲ့, အတော်လေးတိုတောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်းအာရုံစိုက်ဆွဲငင်:
က 6P အဘို့မဟုတ်ကြ, က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဿုံကောင်းစွာမီးမောင်းထိုးကိုင်တွယ်နိုင်. ဒါဟာသင့်ရဲ့လက်ချောင်းလက်ဗွေစကင်နာငြိမ်ဝပ်ဒုတိယထံမှလေးစားမှုကိုပညတ်တော်မူ၏, Android နှင့် Marshmallow အတွက် niceties ရှည်လျားသောနော display ကိုအပေါ်များမှာ. ဒါဟာခြီးမှမျးစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချလျှက်တစ်ခြီးမှမျးဖုန်း.
သူ့ရဲ့ 5.2 လက်မအရွယ် screen နှင့်အတူ, အ 5x လွန်းကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူး, နှင့်သေးငယ်လွန်းမ. သငျသညျတစျဦးကိုလက်နှင့်အတူကျင်းပရန်အဘို့ဖုန်းလည်းလေးလံသောပါးလွှာနှင့်မဟုတ်ပါဘူး. သင်ကအပေါ်တစ်ဦးချုပ်ကိုင်ရနိုင်. နောက်ကျောအပေါ်ကင်မရာကိုအသုံးပြုရန်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာပြားချပ်ချပ်အိပ်မပါဘူး. ဘက်ထရီကြာကြာကြာရှည်နိုင်. သငျသညျမိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖုန်း၏နာမကိုမပြောင်းနိုင်, အပေါ်နဲ့မတူပဲ, ပွောဆို, Moto X ကိုသန့်စင်သော Edition ကို. သင်တစ်ဦးကို Nexus 5x ကိုဝယ်ဖို့ရှေးခယျြလျှင်သင်တို့မူကားတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောနည်းနည်းကွန်ပျူတာ device ကိုရလိမ့်မယ်.
Mashable ရဲ့ရေမွန်က Wong ပင်ဒီစျေးနှုန်းမှာအကြံပြု, က Nexus 5x အချို့သောပြိုင်ဘက်များက outgunned စေခြင်းငှါ:
အဆိုပါ 5x ကျောက်-အစိုင်အခဲ Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါသည် - ဂူဂဲလ်ဖုန်းအနီးဆုံးအရာလည်းမရှိ - ပေမယ့်0င်-တစ်ခုခုအာကာသအတွင်းခက်ခဲ-ရိုက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးလည်းရှိရဲ့. သင်ရုံအဖြစ်အလွယ်တကူအဘို့တတိယမျိုးဆက် Moto X ကိုရနိုင်916GB နှင့်အတူ (နှင့်ကာ microSD card ကိုမှတဆင့်ကသိုလှောင်မှုပမာဏတိုးချဲ့) နှင့်သင်တစ်ဦးပိုကြီးပြီးပိုမြင့်-res မျက်နှာပြင်ရလိမ့်မယ်, Motorola ရဲ့အသုံးဝင်ဆော့ဖ်ဝဲကို tweaks နှင့်အတူစတော့ရှယ်ယာကို Android, တစ်ဦးမျှမျှတတနိုင်စွမ်းကင်မရာက. အဆိုပါ OnePlus2မှာအခြားအကြီးအ option ဖြစ်တယ်9တစ်ဦး 64GB မော်ဒယ်.
တစ်ဦးက Android စမတ်ဖုန်းဝယ်ယူကြောင့်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်, တစ်ဦးထက်ပို Pocket အရွယ်အစားနှင့်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာများအတွက်အနည်းငယ်ပရီမီယံပေးဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အရေးကြီးပါတယ်လျှင်ဒီတော့သင့်ရဲ့အိမ်စာပြုပါနှင့်ကိုယ်အဘို့ဆုံးဖြတ်.
ကို Nexus 5x နှင့် 6P
ars Technica ရဲ့ Ron Amadeo အတူတူနှစ်ခုစမတ်ဖုန်းစဉ်းစား, သူတို့နှင့် Android အတွက်ထိုက်တန် flagships ပြောဆိုထားသည်:
ရှေ့မှာ, တစ်ဦးကို Nexus ဝယ်ယူသင်တစ်ဦးဆိုးကင်မရာသို့စဆင်းရဲသားကိုဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ခဲ့ရရည်ရွယ်, ဒါပေမယ့်ကို Nexus 5x နှင့် 6P မျှအပေးအယူလုပ်ရန်အနည်းငယ်ဖြင့်တည်ဆောက်ပထမဦးဆုံး Android devices များကိုများမှာ. သငျသညျအကွောငျးကိုတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းအဆိုပါတစ်ချက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်. တစ်ဦးကို Nexus အပေါ်ကင်မရာကနောက်ဆုံးမှာသည်ကောင်း. အဆိုပါ 12.3 အမတ်ကင်မရာ 5x နီးပါးနှစ်ကြိမ်စျေးနှုန်းဖြစ်ကြောင်းဖုန်းများနှင့်အတူတွဲလွဲဆွဲထားနိုင်ပါတယ်.
အချို့သောနည်းလမ်းများတွင်ဤထုတ်ကုန်ကို Android ဂေဟစနစ်အနေဖြင့်အကောင်းဆုံးအိုင်ဒီယာပေါင်းစပ်တူခံစားရ. သငျသညျ Motorola ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် display ကိုရအမြဲ-အပေါ်အသံအမိန့်, LG ရဲ့လေဆာအော်တိုဆုံ, နဲ့ Google ၏ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်း, လုံခွုံရေး, မြန်ဆန်မွမ်းမံမှုများ. ကို Nexus ဖုန်းများကို၏ယခုနှစ်သီးနှံကို Android ဂေဟစနစ်ပေါ်ကနေတယောက်တည်းရပ်နေကြောင်းထုတ်ကုန်များမှာ, အင်္ဂါရပ်များပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်တကွသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားသူကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်.
Motorola က Moto X ကိုစတိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်: ဖြတ်-စျေးနှုန်းအရည်အသွေးမြင့် Phablet ကို
30890	0 အက္ခရာ, Android မှာ, အပိုဒ်, Google က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, စမတ်ဖုန်း, စတူးဝပ်သောင်, နည်းပညာ
← အပါအဝငျကအတွက် hyperactive ဦးနှောက်ရဲ့ခုခံအားဆဲလ် အက်စပရင်ကိုမေလအကူအညီကာကွယ်ကင်ဆာ ! →